Indlela yokubhala isihloko
Ukupapashwa kuhlala kunesibonelelo sokusonga iintloko zabo kunye nezihloko ngemifanekiso enamandla okanye iinkcazo. Kwindawo yedijithali, obo bunewunewu zihlala zingekho. Umxholo wakhe wonke umntu ujongeka ngokufana kwiTweet okanye kwiZiphumo zeNjini yokuKhangela. Kuya kufuneka sibambe ingqalelo yabafundi abaxakekileyo ngcono kunabo sikhuphisana nabo ukuze bacofe kwaye bafumane umxholo abawufunayo.
Ngokomndilili, baphindaphindwe kahlanu abantu abaninzi bafunda umxholo njengoko befunda ikopi yomzimba. Xa ubhale umxholo wakho, uchithe iisenti ezingama-80 kwidola yakho.
UDavid Ogilvy, Ukuvuma koMntu oThengisayo
Qaphela anditshongo ubhala njani iqhosha lokucofa, okanye ukubafumana njani abafundi ukucofa nje. Ngalo lonke ixesha usenza oko, uphulukana nokuzithemba okufumaneke nzima komfundi wakho. Kwaye ukuthembela ngumnqweno wabo bonke abathengisi abanqwenela ukwenza ishishini kunye nomfundi wabo olandelayo. Kungenxa yoko le nto iisayithi ezininzi zokucofa zingathengisi nantoni na ngaphandle kwendawo yentengiso. Bafuna amanani ukuze banyuse amaxabiso entengiso, hayi ukuthembela kwabo batyeleli.
I-Salesforce Canada idibanise i-infographic, Uzibhala njani izihloko ezinamandla ezifuna ingqalelo. Kuyo, bathetha ngokusebenzisa le ndlela ilandelayo.
SHINE Indlela yokuBhala iiTayitile ezilungileyo
S - Yiba ethile malunga nesihloko obhala ngaso.
H - Yiba eluncedo. Ukubonelela ngexabiso kubaphulaphuli bakho kulwandisa ukholo lwabo kunye nentembelo yakho kuwe njengegunya.
I - Yiba ngokukhawuleza umdla. Amagama aphambili asezantsi anezinto eziqhelekileyo awazisiki.
N - Yiba iindaba. Ukuba omnye umntu ubhale inqaku elingcono, yabelana nabo kwaye ugcine ixesha lakho!
E - Yiba nwabisa. Ukuthetha ngentengiso kunye neelwimi ezichazayo ziya kubeka abaphulaphuli bakho balale.
I-infographic icebisa I-CoSchedule yeBhlog yePosi yokuHlola izihloko, endibonelele nge-B + kwesi sihloko. Eli nqaku laliphezulu ngenxa ye- Kwenziwa kanjani element. Amanqaku ewonke asekwe kuwo Ixabiso lokuThengisa ngokweemvakalelo ialgorithm eqikelela ukuba isihloko siza kwabiwa njani ngokusekwe kwisigama esisetyenzisiweyo.
Elinye iqhinga elilula lokuba ababhali abakhupheli baqhubeke nokundibonisa ukuba iyasebenza indlela yokusongela isihloko sakho kwigama lakho okanye lakho ukuze unyanzelwe ukuba uthethe ngqo nomfundi. Ukuthetha ngokuthe ngqo kumfundi wakho kwenza amava akho kwaye kwakha unxibelelwano kwangoko phakathi kwakho nomfundi wakho, ukukhuthaza abafundi bakho ukuba bacofe-ukuze bafunde konke.
tags: izinga lokucofaclickbaitNxaxhebanwabisazihlokoeluncedokwenziwa kanjaniubhala njani isihlokoindlela yokubhala izihlokokwi-infographicUmdlaiindabaukuthengisaintengiso Canadaiphepha leinjini yokukhangelainyokaKukhanyaethileizihlokoukubhala iintlokoizihloko zokubhala
Jul 11, 2016 ngo-9: 53 AM
Iingcebiso ezintle, Douglas! Uyakwazo oko? Ndikwazisebenzisa izixhobo ezinje nge-HubSpot Topic Generator okanye i-Blog Title Generator yi-BlogAbout- bayandinceda ndicacisa umxholo oqhelekileyo ngesihloko sokubamba abafundi. Ungabona eminye imizekelo yesihloko eveliswa zezi zixhobo kwibhlog yam http://www.edugeeksclub.com/blog .
Ngendlela, andivanga nge-Headline Analyzer- ngokuqinisekileyo ndiza kuyisebenzisa kwikamva.